Nosy Cayman mamaky firaketana momba ny fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Nosy Cayman mamaky firaketana momba ny fizahan-tany
Janoary 26, 2019
Ny Nosy Cayman dia nitazona ny anjarany tamin'ny tsenan'ny taonan'ny fahatongavan'ireo antontanisa.
Taorian'ny herintaona nisesisesy ho an'ny dia any Karaiba niaraka tamin'ny fitomboan'ny fifaninanana nanerana ny faritra, ny Nosy Cayman dia nitazona ny anjarany tamin'ny tsena iray taona nahitana statistika tsy nahomby. Tamin'ny faran'ny taona 2018, ny fitsidihana tanteraka dia nihoatra ny taona rehetra tamin'ny fitsidihana an-tsoratra, anisan'izany ny 2006, izay nitana ny rakitsoratry ny mpitsidika ambony indrindra tamin'ny taona kalandrie.
Ny totalin'ny fahatongavana ho an'ny taona 2018 amin'ny fitsidihana an-habakabaka sy an-dranomasina dia 2,384,058, izay fiakarana 11.05 isan-jato nandritra ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2017 (olona fanampiny 237,211 463,001). 10.66 mpitsidika stayover, fiakarana 44,598 isan-jato - mpitsidika 2018 fanampiny — mihoatra ny taona XNUMX, dia taona 'voalohany' mahaliana ho an'ny toerana haleha:
• Ny Nosy Cayman dia nandray mpitsidika stayover 450,000 voalohany.
• Ny fahatongavana amin'ny taona 2018 dia maneho ny isan'ny fitsidihan'ny stayover ambony indrindra mandritra ny taona kalandrie amin'ny tantara voarakitra (nihoatra ny Jan-Dec 2017).
• Amin'ny maha-zava-bita avo roa heny ny 'voalohany' dia mpitsidika mihoatra ny 50,000 2018 no nandehandeha nankany amin'ny toerana iray tao anatin'ny iray volana, nitranga indroa tamin'ny XNUMX: Martsa sy Desambra.
Io fiakarana lehibe teo amin'ny fitsidihana io dia nisy fiatraikany tsara tamin'ny toekarena teo an-toerana tamin'ny fiakaran'ny vidin'ny mpitsidika, nitombo US $ 98.1 tapitrisa noho ny taona 2017. Ny tombam-bidin'ny mpitsidika tamin'ny taona 2018 dia US $ 880.1m, fiakarana 12.5 isan-jato.
Ny praiminisitra lefitra ary ny minisitry ny fizahantany, ny Hon. Moses Kirkconnell dia nizara, "Ny andraikitry ny Minisitera sy ny departemantan'ny fizahantany dia ny fanamorana ny fitomboana isan-taona amin'ny famangiana sy fandraisana anjara ara-toekarena; ny Minisiterako dia manenjika izany stratejika isan-taona. Tamin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny famoronana, ny fiaraha-miasa ary ny fiaraha-miasa mitohy amin'ireo mpiray antoka aminay amin'ny indostria, dia nitana ny zava-bita manan-danja nandritra ny taona maro izahay. Ny governemantantsika dia nanolo-tena hampiasa vola amin'ny toerana hidiranay amin'ny seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina. Ireo fanavaozana tena ilaina ireo dia handray soa avy amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany, orinasa, mpitsidika ary mponina. Ny ifantohako dia ny manome antoka fa ny lohahevitra rehetra ao amin'ny portfolio'ny minisiterako dia miasa tsara sy mahomby hanohanana ny sehatry ny fizahantany. Ireo valiny ireo dia famantarana tsara amin'ny asa vita tamin'ny taona 2018. "
Tamin'ny taona 2018, ny USA, Canada, ary LATAM dia nisy fiatraikany betsaka tamin'ny isa tonga. Ny firenena manokana misy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fampisehoana ankapobeny amin'ny taona 2018 dia:
• Etazonia: 13.01%
• Jamaika: 7.63%
• Arzantina: 17.54%
Ny volana Desambra dia voamarika ho ny tsara indrindra voarakitra an-tsoratra, miaraka amin'ny fampitomboana 6.15 isan-jato ny fahatongavan'ireo stayover miaraka amin'ny toerana ahazoana maherin'ny 50,000 izay natolotry ny tsena amerikana avaratra. Tahaka ny fiakaran'ny statistika amin'ny ankapobeny, ny Etazonia dia nisy fiatraikany lehibe indrindra tamin'ny volana desambra izay nitombo 2,600 21 ny mpitsidika fanampiny. Ity dia manamarika ny volana faha-2018 nisesy nitombo ho an'ity tsena ity izay nahitana fitomboan'ny fahaizan'ny mpitatitra saina nasionaly Cayman Airways avy amin'ny JFK niaraka tamin'ny sidina isan'andro tamin'ny Desambra 2017 raha oharina tamin'ny Desambra 3.30. Nahitana fitomboana 3.32 isan-jato i Canada ka lasa Desambra tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny statistika ity. ho an'ny fitsidihan'ny stayover kanadiana. Manampy ny fahombiazan'ny isa tamin'ny fanapahana firaketana tamin'ny Desambra, nitombo XNUMX isan-jato ihany koa i Amerika Latina ary io no volana tsara indrindra amin'ny tantaran'ny fahatongavan'io faritra io.
"Ny tanjon'ny fizahantany fizahan-tany amin'ny fizarana tsena marobe miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny làlana vaovao mankany amin'ny toerana haleha sy ny drafitra marketing vaovao dia nanohy nitondra fahombiazana ho an'ny nosy Cayman ary hitohy amin'ny taona 2019," hoy ny talen'ny fizahan-tany, Andriamatoa Rosa Harris. "Ny manamarika fa ny fiaramanidina dia zava-dehibe amin'ny familiana amin'ny fitsidihana ny ekipantsika manerantany dia mijanona ho tapa-kevitra amin'ny fampitomboana ny fahaizany ary tena faly amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny làlana Denver Colorado amin'ny volana martsa miaraka amin'i Cayman Airways. Ho vavahady fidirana ho an'ny West Coast, dia manantena ny handray mpitsidika vaovao maro avy any Colorado sy tanàna vaovao avy any Etazonia izahay amin'ny taona 2019 mba hanampiana taonan'ny fahombiazan'ny Nosy Cayman. Tiako ny maneho fisaorana feno ho an'ireo mpiara-miombon'antoka fizahan-tany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fivarotana, ny fampiantranoana ireo mpitsidika anay, ny mpanao gazety ary ny mpitsangatsangana mba hampialana voly, hampianarana ary hitaterana ny marika Cayman Islands manerantany. ”
New York, Thailand, Portugal ary ny tany Basque Country ao amin'ny FITUR GAY (LGBT +)
Ny filoha sinoa dia nidera ny fanombohan'ny taom-pizahan-tany China-Laos 2019